Eskilstuna waa magaala madaxda gobalka Södermanland. Waxay u jirtaa caasimada Stockholm masaafo dhan 111 km halka tareenka loo socdo 1 saac, waloow la rabo in laga dhigo 45 daqiiqo stockholm iyo Eskilstuna. Kamuunka Eskilstuna ayaa waxaa degan shacab gaaraya 96,000. Eskilstuna waa kammunka ugu dadka badan Södermanland inta la isku yiraahdo, waxa ay ka kooban tahay 35 xaafadood iyo magaalooyin ka baxsan oo lagu tiriyo 12 xaafadood. Bulshad Soomaalida ee ku nool magaalada Eskilstuna ayaa waxay deganyihiin Centrumka magaalada iyo xaafadaha ku dhadhow, ayadoo dadku ay ku tiriyaan magaalada Eskilstuna in ay tahay mid ka degan oo caruurta iyo dadka waayeelka ah u wanaagsan. Guryaha: Shirkadaha guryaha bixiya ayaa isugu jira kuwa kala duwan, ayadoo meesha ay Soomaalida u badan yihiin hal shirkad ay ka jirto taasoo aanan ku xujeeynin dadka wax damiin ah, aayna u baahan yihiin oo kaliya in aad lee dahay wax ku cadeeyo in aad gurikiraysan karto. Xiliyadii hore ayaa guryaha waxa lagu heli jiray muda yar ilaa bil gudaheeda balse hada 3 bil ayaad sugaysaa. Guryaha ayaa lagu helaa qiimaha ah 1 qol : 2,000-3,000 Kr, 2 qol : 3,000-4,000 Kr, 3 qol : 4,000-5,000 Kr--- 5 qol: 6,000-7,000 Kr. Ayadoo xiliyadii hore ay dadku inta guri ay kiraystaan ay durbadiida ka guuri kareen balse hada ayay qasabtahay in aad deganaado 6 bilood ugu yaraan. Waxbarashada: Waxbarashada Eskilstuna ayaa ah mid aad u hor marsan soona koraysa marka loo fiiriyo Gobalka in tisa kale. Magaalada waxaa ku yaala hal jaamacad iyo hal komvux. Sidoo kale waxay leedahay hal meel oo lagu barto Maadada Swedishka Soo galootiga ee SFI loo yaqaan, waxaana uu gobalka aad u hormariyay waxbarashada iyadoo ay tahay meelaha uu rabo in uu ku faantamo Gobalka. SFI waxaad sugaysaa 2 ilaa 3 bil marka aad iska diiwaan galiso xarunta dhexe ee adeega waxbarashada, waxa uu ahaan jiray 2010 ka hor SFIga in aan la isku qasbi jirin, ayadoo ay okey ahayd haddii aad rabtid in aad gurigaaga iska joogto. Waloow ay wali sidii tahay hadana waxa uu qofka leeyahay hal fursad hadii ad qasariso mar kale ayaad leedahay fursad, hadii ad rabtidna gurigaada ayad iska jogaysaa wax lacag ahna lagaa goosan maayo. SFIga ayaa labada galin lakala dhigtaa subax iyo galabkii. Koorsooyinka A,B,C halka D aad habeen ku dhigan kartid. Eskilstuna aya ku jirto kammunada bilad sharafka ku bixin doona lacagta loogu talagalay SFIga iyadoo lacagtas aysan kula xisab tami doonin cayrta iyo skatka oo lacagtas bilaash tahay. Shaqada iyo Praktiga: Inta badan Soomaalida ku nool Eskilstuna ayaa shaqo la'aan ah, waloow markii aad fiiriso websiteyada shaqooyinka in ay banaanyihiin shaqooyin badan balse ay u baahanyihiin aqoon waxbarasho. Praktiga ayaa baryahan dambe laga dhigay mid la isku diro Eskilstuna. Dadka ayaa u badan meelaha loogu diro luuqada in ay ku soo fahmaan, sida dugsiyada xananada carurta iyo meelaha la midka ah. Ilaa hada ma jiraan meelaha Praktiga la isugu diro in ay dadka qaatan madama ay ku cusub tahay arinkaan. Dhanka kale qofka praktiga waxaa uu rabo ayuu sheeganayaa waana loo soo radinayaa hadii uu xirfad horay u yaqanay uu ahaa qof wadankiisa wax ku soo bartay. Hadii laga soo helo Eskilstuna ama meel ka baxsan qofka ayaa loo so bandhigayaa hadii uu adayo meesha looga so helay. Hadii xirfadaada aad rabtid la soo waayo praktig aadi maysid iskuulada ayaad dhiganaysa oo kaliya. Nolosha Guud iyo Isku Socodka: Muslimiinta ayaa kus oo badanaya magaalada Eskilstuna ayadoo aysan jirin wax naceyb ah oo ay kala kulmaan bulshada guud, magaalada ma leh masaajid wayn balse dadka ayaa waxa ay isticmaalaan lookalo ku kala yaal xaafadaha magaalada. Bulshada Eskilstuna ayaa u badan kuwo socodka lugta ama baaskiilka adeegsada waqtiyada sammarka. Xilayada qaboobaha oo soo dhaw ayaa waxa dadka ay raacaan busaska ,meesha ay jiraan bussas kala oo aada Gobalada wadanka iyo arlanda airport. Tareemada ayaa ayagana si wanaagsan uga shaqeeya magaalada oo aada meelaha dhadhow iyo kuwa fog. Waxaa soo diyaariyay Abdifatah Abdulahi Isse Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden. Adiguna waxaad noo soo diri kartaa warbixin ku saabsan nolosha kamuunka aad ku nooshahay.
Eskilstuna waa magaala madaxda gobalka Södermanland. Waxay u jirtaa caasimada Stockholm masaafo dhan 111 km halka tareenka loo socdo 1 saac, waloow la rabo in laga dhigo 45 daqiiqo stockholm iyo Eskilstuna.
Kamuunka Eskilstuna ayaa waxaa degan shacab gaaraya 96,000. Eskilstuna waa kammunka ugu dadka badan Södermanland inta la isku yiraahdo, waxa ay ka kooban tahay 35 xaafadood iyo magaalooyin ka baxsan oo lagu tiriyo 12 xaafadood.
Bulshad Soomaalida ee ku nool magaalada Eskilstuna ayaa waxay deganyihiin Centrumka magaalada iyo xaafadaha ku dhadhow, ayadoo dadku ay ku tiriyaan magaalada Eskilstuna in ay tahay mid ka degan oo caruurta iyo dadka waayeelka ah u wanaagsan.
Guryaha: Shirkadaha guryaha bixiya ayaa isugu jira kuwa kala duwan, ayadoo meesha ay Soomaalida u badan yihiin hal shirkad ay ka jirto taasoo aanan ku xujeeynin dadka wax damiin ah, aayna u baahan yihiin oo kaliya in aad lee dahay wax ku cadeeyo in aad gurikiraysan karto. Xiliyadii hore ayaa guryaha waxa lagu heli jiray muda yar ilaa bil gudaheeda balse hada 3 bil ayaad sugaysaa. Guryaha ayaa lagu helaa qiimaha ah 1 qol : 2,000-3,000 Kr, 2 qol : 3,000-4,000 Kr, 3 qol : 4,000-5,000 Kr— 5 qol: 6,000-7,000 Kr.
Ayadoo xiliyadii hore ay dadku inta guri ay kiraystaan ay durbadiida ka guuri kareen balse hada ayay qasabtahay in aad deganaado 6 bilood ugu yaraan.
Waxbarashada: Waxbarashada Eskilstuna ayaa ah mid aad u hor marsan soona koraysa marka loo fiiriyo Gobalka in tisa kale. Magaalada waxaa ku yaala hal jaamacad iyo hal komvux. Sidoo kale waxay leedahay hal meel oo lagu barto Maadada Swedishka Soo galootiga ee SFI loo yaqaan, waxaana uu gobalka aad u hormariyay waxbarashada iyadoo ay tahay meelaha uu rabo in uu ku faantamo Gobalka.
SFI waxaad sugaysaa 2 ilaa 3 bil marka aad iska diiwaan galiso xarunta dhexe ee adeega waxbarashada, waxa uu ahaan jiray 2010 ka hor SFIga in aan la isku qasbi jirin, ayadoo ay okey ahayd haddii aad rabtid in aad gurigaaga iska joogto. Waloow ay wali sidii tahay hadana waxa uu qofka leeyahay hal fursad hadii ad qasariso mar kale ayaad leedahay fursad, hadii ad rabtidna gurigaada ayad iska jogaysaa wax lacag ahna lagaa goosan maayo.
SFIga ayaa labada galin lakala dhigtaa subax iyo galabkii. Koorsooyinka A,B,C halka D aad habeen ku dhigan kartid. Eskilstuna aya ku jirto kammunada bilad sharafka ku bixin doona lacagta loogu talagalay SFIga iyadoo lacagtas aysan kula xisab tami doonin cayrta iyo skatka oo lacagtas bilaash tahay.
Shaqada iyo Praktiga: Inta badan Soomaalida ku nool Eskilstuna ayaa shaqo la’aan ah, waloow markii aad fiiriso websiteyada shaqooyinka in ay banaanyihiin shaqooyin badan balse ay u baahanyihiin aqoon waxbarasho.
Praktiga ayaa baryahan dambe laga dhigay mid la isku diro Eskilstuna. Dadka ayaa u badan meelaha loogu diro luuqada in ay ku soo fahmaan, sida dugsiyada xananada carurta iyo meelaha la midka ah. Ilaa hada ma jiraan meelaha Praktiga la isugu diro in ay dadka qaatan madama ay ku cusub tahay arinkaan.
Dhanka kale qofka praktiga waxaa uu rabo ayuu sheeganayaa waana loo soo radinayaa hadii uu xirfad horay u yaqanay uu ahaa qof wadankiisa wax ku soo bartay. Hadii laga soo helo Eskilstuna ama meel ka baxsan qofka ayaa loo so bandhigayaa hadii uu adayo meesha looga so helay. Hadii xirfadaada aad rabtid la soo waayo praktig aadi maysid iskuulada ayaad dhiganaysa oo kaliya.
Nolosha Guud iyo Isku Socodka: Muslimiinta ayaa kus oo badanaya magaalada Eskilstuna ayadoo aysan jirin wax naceyb ah oo ay kala kulmaan bulshada guud, magaalada ma leh masaajid wayn balse dadka ayaa waxa ay isticmaalaan lookalo ku kala yaal xaafadaha magaalada.
Bulshada Eskilstuna ayaa u badan kuwo socodka lugta ama baaskiilka adeegsada waqtiyada sammarka. Xilayada qaboobaha oo soo dhaw ayaa waxa dadka ay raacaan busaska ,meesha ay jiraan bussas kala oo aada Gobalada wadanka iyo arlanda airport. Tareemada ayaa ayagana si wanaagsan uga shaqeeya magaalada oo aada meelaha dhadhow iyo kuwa fog.
Waxaa soo diyaariyay Abdifatah Abdulahi Isse